Wasaarada Maaliyada Puntland oo Go’aan ka soo saartay Hoos u dhaca Sarifka – SBC
Wasaarada Maaliyada Puntland oo Go’aan ka soo saartay Hoos u dhaca Sarifka
Iyadoo mudoyinkii u damaysay laga daremayey Suuqyadda Sarifka ee deegaanada puntland hoose dhanka ku yimid sarifka Doolarka maraykanka ah, ayaa manta wasaarada Maaliyada Puntland ay kasoo sartay qoraal lagu mamnuucayo lacagaha kaashkan ah ee lo dhoofiyo konfurta Somalia.
Wasiir ku xigenka wasarada Maaliyadda Cabdi Warsame Qowdhan ayaa warfidyeenka ugu sheegey xafiiskiisa qoraal ay wasaaradiisu ku Mamnuuceyso guud ahaanba in wax Shilin Soomaaliya an loo dhoofin Karin Koonfurta Somalia iyo meel kalena toona .
Wasiirka ayaa ku macneeyey arintaasi in ay jiraan Ganacsato Doollar ka keena Muqdisho islamarkaana kaash kaga baddala Suuqyadda Puntland,taasina ay sababto in qiimaha Sarifku doollarku hoos u dhaco.
Qoraalka ayaa sidoo lagu Amrey Ciidamadda Kastmadda in baadhitaan buuxa ku sameeyaan Gaadiidka looga shakiyo in ay sidaan lacagahaasi.
Hadalkan kasoo baxay xafiiska wasiirka maaliyada Puntland ee lagu mamnuucayo lacagaha shilin somaliga ah ee loo rarayo koonfurta soomaaliya ayaa ku soo beegmaya waqti si weyn loo dareensayahey hoos u dhaca ku yimid sarifka doolarka, taasoo saameyn ku yeelatey dadka Danyarta ah.